Dagaal Laga Cabsi Qabo Inuu Qarxo iyo Madaxweyne Farmaajo oo Ka Dambeeya.
November 2, 2018 puntlandnews
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa si weyn u naqdiyay khudbadii Madaxweyne Farmaajo xalay u jeediyay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Jubba, kaasoo ka dhan ah maamul goboleedyada.
C/raxmaan C/shakuur oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa ku tilmaamay khudbadda Madaxweynaha mid uu ka muuqdo daan daansi dagaal iyo jees jees.
Waxaa uu sheegay in hadalka Madaxweynaha uu ka sheegay magaalada Jubba aanay iska turjumeyn baaqiisa maalmo ka hor ee uu gogosha ugu fidiyay kuna martiqaaday shir wadatashi madaxda dowlad Goboleedyada.
“Khudbad daan daansi iyo dagaal uu ka muuqdo , Madaxweynaha asigaa dhowr maalin ka hor sheegay inuu gogol u fidiyay madaxda maamul goboleedyad ooo ku baaqayo in shir la isugu yimaado wixii tabasho ah uu garawsan yahay, sida dad badan tuhunsan yahay martiqaadkiisa iyo fariinta xalay uu dirayay wey kala fog yihiin”ayuu yiri C/raxmaan C/shakuur.
Sidoo kale C/raxmaan C/shakuur ayaa sheegay in hadalka Madaxweynaha aanu aheyn mid nabad iyo dib u heshiisiin raadinaya, isagoo xusay in maamul goboleedyada ay ka mid yihiin xooggaga siyaasadda, isagoo xusuusiyay in shirkii ka dhacay Brussels la isugu wada yeeray Madaxweynaha iyo Madaxda maamul goboleedyada oo Beesha Caalamka isugu yeertay.
“Waxaa rabaa inaan xusuusiyo Madaxweynaha kulankii ugu dambeeyay ee Brussels ka dhacay Beesha caalamka ayaa isugu yeertay isaga iyo Madaxda Maamul goboleedyad,a wax laga hadlayo waa arrimo Soomaaliya ku saabsan, looma yeerin Madaxweynaha keligiis, ayagana waa loo yeeray wuu ogyahay Madaxweynaha waaqica horyaala in dalkaan ku jiro marxalad dib u heshiisiin, marka aniga hadalka Madaxweynaha ilama ahan mid nabad iyo dib u heshiisiin oo isu soo dhowaansho raadinaya”ayuu yiri”ayuu yiri Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur.
Waxaa uu ku baaqay in aan gadaal loo celin marxaladihii dalka soo maray, isagoo xusay in aan wax la aqbalo aheyn in Madaxweynaha uu afna ku yiraahdo wada hadal, afna hadalo adag uu kula hadlo maamul goboleedyada, isagoo ugu baaqay inuu buurta ka soo dego oo uu xalka raadiyo.
Hadalkii Madaxweyne Farmaajo ka jeediyay magaalada Jubba ayaa loo arkaa mid sii hurinaya khilaafka ka dhex taagan dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyadoo Aqalka sare uu ku howlan yahay dadaalo lagu dhex dhexaadinayo labada dhinac.
Qormadaan waxay muujineysaa mucaaradnimada, waa la noqdaa mucaarad oo waa la sheegaa run laakiin shalay ninkaad wax ka sheegeysey inaad maanta hadaladiisa soo xigato waa daciifnimo . Maadaama aad qoraa Punlad tahay waxaan kaa codsanayaa inaad saxdo cadaadiska iyo xaqdarada ka jirto gudihiina iyo horumar la aanta idin haysat > Dhista magaalooyinkiina, shaqaaleeya dhalinyaradiida , Isbitaalo waaweyn dhista wadooyinka dhista. Miisaaniyadiina ku soo darsada awalba ma haysataan hogaamiye aqoon leh.,